गोरखामा गठबन्धन दुई तीर, एमाले एक्लै: मेयरमा कसले मार्ला बाजी ? - Narayanionline.com Narayanionline.com गोरखामा गठबन्धन दुई तीर, एमाले एक्लै: मेयरमा कसले मार्ला बाजी ? - Narayanionline.com
गोरखामा गठबन्धन दुई तीर, एमाले एक्लै: मेयरमा कसले मार्ला बाजी ?
मेयरमा कसले मार्ला बाजी रु
राप्रपाका उम्मेदवार पाण्डे पनि गोरखा नगरपालिका ९तत्कालिन पृथ्वीनारायण नगरपालिका०का पूर्व प्रधानपन्च हुन् । पार्टीको सांगठनिक अवस्था कमजोर भए पनि व्यक्तिगत उनको मत बलियो छ ।
गोनपामा हाल ३५ हजार ३१ मतदाता छन् । आसन्न निर्वाचनबाट गोनपामा भने नसाँेचेको परिणाम आउने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।